Puma Smartwatch: Igwe elekere nke ika na Wear OS | Akụkọ akụrụngwa
IFA 2019 na-ahapụ anyị ka anyị nweta ngwaahịa ndị na-adọrọ mmasị. Otu n'ime ngwaahịa ndị ewebatalarị na mmemme teknụzụ na Berlin bụ Puma Smartwatch. Egwuregwu egwuregwu a ma ama na-ahapụ anyị na igwe elekere a, nke na-eji Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ. Ọ na-egosi ntinye nke ụlọ ọrụ ahụ na mpaghara ahịa a, nke na-aga n'ihu na-eto taa.
Maka mmepe nke Puma Smartwatch a, ụlọ ọrụ ahụ na Fosil arụkọla ọrụ, ụlọ ọrụ nwere nnukwu ahụmịhe n'ọhịa nke elele egwuregwu. Ya mere, anyị na-eche ihu ihe nlereanya nwere ike ịnwe ezigbo ọsọ na mpaghara ahịa a.
Site na okwu dị ka "Tinye ya, jikọọ ma gbaa ọsọ", o doro anyị anya na anyị bụ tupu elekere emebere maka egwuregwu. Ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike, ndị na-eme ụdị egwuregwu dị iche iche ma na-achọ ijikwa ọrụ ha mgbe niile, na mgbakwunye na ịnweta ọrụ ndị ọzọ. E gosipụtara ya dị ka ezigbo nhọrọ na nke a. Ya imewe bụkwa egwuregwu, ma ezi uche ma na dị mfe e n'ozuzu.
1 Nkọwa Puma Smartwatch
Nkọwa Puma Smartwatch
Puma Smartwatch nwere ihuenyo AMOLED nke dị sentimita 1,2. A tọhapụrụ ya na otu ikpe, 44mm n'okwu a. Ọ bụ ezie na anyị ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti agba atọ, nke bụ ndị enwere ike ịhụ na foto: ojii, ọcha na odo. Yabụ onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịhọrọ nke ụdị elekere a kacha amasị.
N'ime ya A Qualcomm Snapdragon Wear 3100 processor na-echere anyị, kpochapụwo n'ọhịa elekere. Ọ na-abịa na RAM nke 512 GB ma nwekwara 4 GB nke nchekwa dị n'ime, dịka ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'onwe ya. Batrị nke smartwatch a na-ekwe nkwa inye anyị ezigbo nnwere onwe. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-enye anyị oge 24 nke ndụ batrị, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị ejiri ọnọdụ nchekwa ike dị na ya, anyị nwere ike ime ka ọ bụrụ awa 48.
Dị ka ọ na-adịwanye njọ na mpaghara ahịa a, Puma Smartwatch a na-ahapụkwa anyị ngwa ngwa. Naanị oge 50 oge anyị ga-enwe ike ịgba 80% nke otu batrị. Banyere sistemụ arụmọrụ, dịka anyị kwuru na mbụ, ọ na-eji Wear OS, sistemụ arụmọrụ Google. Nke a bụ ihe na-enye gị ohere ịnweta atụmatụ dịka Google Assistant ma ọ bụ syncing zuru oke na Google Fit, dịka ọmụmaatụ.
Puma Smartwatch nwere ihe mmetụta na ọrụ nke elekere egwuregwu. Ọ nwere ihe mgbagwoju obi ọnụego ihe mmetụta, Ọ na-enyekwa anyị ohere ịmaba ya na 3ATM n'okpuru mmiri, nke na-enye anyị ohere iji ya maka igwu mmiri. O nwekwara GPS, iji tụọ ihe omume egwuregwu anyị na-eme nke ọma. Enwekwara altimita na ya ma o nwere ihe mmetụta NFC, nke ga-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ ekwentị site na nche ahụ n'onwe ya. Anyị ga-enwekwa ike ịrụ ọrụ na ngwa dịka Spotify, ọkwa, ihu igwe na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọrụ ndị a ma ama n'echiche a na smartwatch dị ugbu a n'ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ kwadoro na elekere ahụ a ga-eweputa ya na November nke otu afọ a na ahịa. Ndị nwere mmasị ịzụta ya ga-enwe ike ịme ya na weebụsaịtị Puma. Ọ bụ ezie na a ga-ebikwa ya n'ụlọ ahịa ndị ahọpụtara, nke ga-enyere aka mee ka ọ dị mfe ịzụta elekere a ma ọ bụ hụ ya tupu ịzụta ya.
Banyere ọnụahịa ya, Puma Smartwatch a ga - abata na ọnụahịa nke euro 279 gaa n'ụlọ ahịa, nke Puma n'onwe ya kwadoro. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ elekere nke na-ahapụ ezigbo mmetụta maka arụmọrụ, ọ bụ ezie na akụkụ a enweelarị ụdị ụfọdụ nke kwụpụtara ọkachasị, nke chọtalarị ebe na ahịa a. Ya mere ọ ga-anọgide na-ele anya ma ọ ga-emeri ndị na-azụ ahịa mgbe ọ malitere na November. Kedu ihe ị chere banyere elekere a site na ika ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Puma Smartwatch: Akara si smartwatch na Wear OS